Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseChile zokuPhula » I-Chile iyavula kwakhona kubakhenkethi abagonywe ngokupheleleyo
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseChile zokuPhula • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Ukuvalelwa yedwa kubahambi abagonywe ngokupheleleyo kwilizwe lonke kuya kuphakanyiswa ukuba iziphumo zovavanyo lwabo lwe-PCR olwenziwe ukufika kwabo eChile azikho.
Ukungena eChile kungadlula kwizikhululo zeenqwelo moya ezintathu zeIquique, iAntofagasta, kunye neArturo Merino Benítez.
Ngaphambi kokungena kweli lizwe, izitofu ezifunyenwe ngurhulumente kufuneka ziqinisekiswe ukuze kunikezelwe ipasipoti yokuhamba eChile.
Abantu abangagonywanga (kwaye ke abanako ukufaka isicelo sokupasa), abakavunyelwa ukuba bangene kweli lizwe.
Amagosa aseburhulumenteni baseChile abhengeze ukuba ukuqala ngo-Novemba 1, 2021, ukuvalelwa yedwa kubahambi abagonywe ngokupheleleyo kuya kuphakanyiswa ukuba iziphumo zovavanyo lwabo lwe-PCR lwenziwe xa befika Chile banee-negative.
Abahambi kufuneka bagonywe ngokupheleleyo, kwaye izitofu zokugonya kufuneka zamkelwe eChile.
Ezi mfuno zilandelayo zokungena ziyahambelana nolwazi lwangoku, olusemthethweni:
Ukungena kwi Chile unokudlula kwizikhululo zeenqwelo moya ezintathu zeIquique, iAntofagasta, kunye neArturo Merino Benítez (SCL, Santiago).
Phambi kokungena kweli lizwe, izitofu ezifunyenwe ngurhulumente kufuneka ziqinisekiswe ukuze incwadi yokundwendwela (pase de movilidad) ikhutshwe Chile. Isicelo sokwamkelwa kwezitofu zokugonya siyafumaneka kwi-intanethi.
Gcwalisa ifom ye-elektroniki "I-Afidavithi yoMhambi" ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-48 ngaphambi kokuba ukhwele, apho kuya kufuneka unikezele ngeenkcukacha zakho zonxibelelwano, ezempilo kunye nembali yendawo. Le fomu iza kubandakanya ikhowudi ye-QR njengendlela yokuqinisekisa. Inokugqitywa kwi-Intanethi (inguqulelo yesiNgesi iyafumaneka).
Abakhenkethi abangena eChile kufuneka babe neinshurensi yezempilo yokuhamba egubungela imali eyi- $ 30,000.
Ubungqina bovavanyo olubi lwe-PCR oluthathwe iiyure ezingama-72 ngaphambi kokubhoda kusafuneka. Uvavanyo lwe-PCR lwenziwa kwakhona kwisikhululo seenqwelomoya esiya eChile.
Uvavanyo lwe-PCR lwenziwa kwisikhululo seenqwelomoya esiya eChile. Abantu abangena kweli lizwe kufuneka bahambe ngezithuthi zabucala kwaye baye ngqo kwindawo echaziweyo yokuhlala ukusuka ngexesha lokungena kwaye balinde apho kuvavanyo lwe-PCR (ixesha ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-24). Ukuba ngaba uvavanyo alunayo, ukuvalelwa yedwa kwiintsuku ezi-5 akusebenzi.